« Festival d’art urbain »: nafonja ny kanto natosaka ho an’ny rehetra | NewsMada
« Festival d’art urbain »: nafonja ny kanto natosaka ho an’ny rehetra
Anisan’ny nanamarika iny volana oktobra iny sy ny fiandohan’ity novambra ity ireo hetsika ara-javakanto, tao anatin’ny “festival d’art urbain”, nokarakarain’ny Is’art galerie. Tafiditra tanteraka tao anatin’ny hetsika ny tanora, afa-po tanteraka.
Nifarana tamim-pomba ofisialy, ny asabotsy tolakandro teo, ny “Festival d’art urbain”, fotoana iray ihaonan’ireo tanora mikolo ny kanto aty an-tanàn-dehibe: “graffiti”, “beat box”, “slam”, dihy, “parcours”, mozika, “vidéo mapping”, sns. Ny tontolon’ny “maty” no nasongadina tamin’ity indray mitoraka ity ary nanaporofo ny maha hetsika goavana azy ny fahamaroan’ny mpandray anjara, izay samy matihanina, avy eto an-toerana sy avy any ivelany.
Tsikaritra ny fahafenoan’ny aingam-panahy sy ny angovo, miampy fitiavana sy fahavononana, nananan’ireo mpanakanto, amin’ny sokajy misy azy ireo avy, nandritra ity “festival” ity. Voaporofo fa miaina anaty kanto, mivoatra nefa misy faka, ny tanora aty an-tanàn-dehibe.